What can you really do withaRaspberry Pi ? | Saturngod
What can you really do withaRaspberry Pi ?
7 Replies Raspberry Pi တစ်ခု ရပြီးရင် သာမာန် လူတစ်ယောက်အတွက် ဘာတွေ လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့
- XBMC အသုံးပြုပြီး media center ထောင်လို့ရတယ်။
- Web Server ထောင်ပြီး အိမ်တွင်း intranet ဆောက်လို့ရတယ်။
- Samba သုံးပြီး External Hard Disk ကို share ထားလို့ရတယ်။
- USB Printer ကို Air Print printer ပြောင်းပြီး အသုံးပြုနိုင်တယ်။
- Computer အသေးစား အနေနဲ့ သုံးလို့ရတယ်။
- Python , PHP , C++ စတဲ့ programming တွေ လေ့ကျင့်တဲ့ အနေနဲ့ သုံးလို့ရတယ်။
XBMC media center အတွက် XBian ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ XBian ကို အသုံးပြုကြည့်တာ 720 p အဆင်ပြေပေမယ့် 1080 MKV ကတော့ တခါတခါ နှေးသွားတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Web Server ပိုင်းမှာ apache က တော့ နှေးပါတယ်။ Nginx က ပိုသင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။ သို့ပေမယ့် nginx ကို သေချာ config လုပ်နိုင်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ php တစ်ခုတည်းအတွက်ဆိုရင်တော့ pancakehttp.net ကို စမ်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ MySQL ကတော့ နှေးနေပါသေးတယ်။ Mongodb ကတော့ မစမ်းကြည့်ရသေးပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် linux ပိုင်းမှာ server တွေကို စမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စျေးနည်းနည်းနဲ့ စမ်းလို့ကောင်းတာ တော့ အမှန်ပါပဲ။
Raspberry Pi ရဲ့ Local Network က အတော်လေးကို နှေးတယ်လို့ ဆိုရမယ့် အဆင့်မှာ ရှိပါတယ်။ ပုံမှန် 1 MB ကနေ2MB အထိပဲ file transfer ရပါတယ်။ Samba ကို အသုံးပြုပြီး4GB video တစ်ကားကို share ဖို့ ဆိုတာ အတော်လေး စောင့်ရပါလိမ့်မယ်။ External Hard Disk ကို USB နဲ့ တပ်ပြီး file ထည့်လိုက်တာက အများကြီး ပိုမြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် file server အနေနဲ့ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ raspberry pi ကို အသုံးမပြုသင့်သေးဘူး။
မစမ်းကြည့်ရသေပါဘူး။ ဝယ်ထားတဲ့ raspberry pi က ၂ လ လည်း ကျော်ရော ၁၀ မိနစ် ထက် ပိုပြီး ဖွင့်မရတဲ့ ပြဿနာ ကြုံနေလို့ Element 14 ကို ပြန်ပို့ရ အုံးမယ်။ အခြားသူတွေ စမ်းကြည့်တာတော့ အဆင်ပြေတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။
Desktop PC အနေနဲ့ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ lxde ကို သာ အသုံးပြုလို့ အဆင်ပြေမယ်။ သို့ပေမယ့် စိတ်ကျေနပ် စရာ ကောင်းလှတဲ့ Desktop quality မျိုးတော့ မရပါဘူး။ ကျွန်တော် ကတော့ desktop ထက် terminal command နဲ့ အသုံးပြုရတာ ပိုအဆင်ပြေတယ်။ Desktop အနေနဲ့ သုံးရတာ နှေးတဲ့အတွက် အဆင်မပြေလှဘူး။
Terminal ကနေ python , ruby , php စတာတွေကို လေ့လာလို့ရပါတယ်။ programming ကို လေ့လာနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေ အတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ သို့ပေမယ့် .NET တော့ သုံးလို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီထက်ပိုပြီး လုပ်နိုင်တာတွေ ကိုတော့ http://www.raspberrypi.org/ မှာ ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်။ အများအားဖြင့် PC computer တစ်ခုထက် hardware ပိုင်းမှာ raspberry pi ကို အသုံးပြုကြတာများပါတယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged raspberrypi on January 15, 2013 by saturngod. Post navigation
← XBian Alpha 4
Tagu 1.2.6 →
7 thoughts on “What can you really do withaRaspberry Pi ?” oakkar7 January 17, 2013 at 5:00 pm desktop applications, programming တွေအတွက်ကတော့ Pi ကို recommend မလုပ်ချင်ပါဘူး၊ programming, application လုပ်လို့မရတာ မဟုတ်ပါ၊ ရပေမယ့် PIII laptop အဟောင်းတစ်လုံးကတောင် ပိုသင့်တော်မှာပါ။
media server,file server, print server သုံးလို့ရနိုင်ပါတယ်၊ တကယ့် dedicated server မျိူးရဲ့ performance မရနိုင်ပါ။
web server တောင် embedded web server based application လို home appliance web control လို မျိုးမှ သင့်တော်မှာပါ။
တကယ်တော့ embedded linux, embedded device development, embedded programmers, hobbyist တွေ အတွက် Pi ကပိုသင့်တော်မှာပါ။ ဥပမာ research ကျောင်းသားတစ်ယောက်က web based control application တစ်ခု develop လုပ်ချင်တယ်..ဝါသနာရှင်တစ်ယောက်က အိမ်မှာရှိတဲ့ Lighting တွေကို အင်တာနက်ကနေ control လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် တော့ Pi ကသင့်တော်ပါတယ်။ generic programming လေ့လာချင်တဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်အတွက်ကတော့ laptop အဟောင်းတစ်လုံးက ပိုကောင်းပါတယ်။
(Ko Saturn ကတော့ သိပြီးဖြစ်မှာပါ၊ အသိတစ်ယောက်က ဒီ link ကိုညွန်းပြီး barebone computer တစ်ခုလိုထင်ပြီး မေးလို့ ဒီ comment ရေးပါတယ်)
Reply ↓ saturngod Post authorJanuary 18, 2013 at 11:11 am အခုလို ပြောပြတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ file server ကို raspberry pi နဲ့ လုပ်တာ အားမပေးချင်ပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူ့ရဲ့ network က တော်တော်လေးကို နှေးပါတယ်။ ကျွန်တော် အိမ်မှာ XBMC နဲ့ media server ဆောက်ထားပြီး file တွေကိုတော့ USB နဲ့ပဲ ကူးနေရပါတယ်။ Hard Disk ကို Samba နဲ့ network မှာ share ထားပေမယ့် အများဆုံး 2MB ပဲ သွားတဲ့ အတွက် ကျွန်တော့် အတွက် အဆင်မပြေပါဘူး။4GB လောက်ရှိတဲ့ file တွေကို backup လုပ်ဖို့အတွက် network ကနေ file transfer လုပ်ရတာ အဆင်မပြေလှဘူး။ print server နဲ့ media center အနေနဲ့ကတော့ တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ raspberry pi ကို XBMC တင်ပြီး Air play ကတော့ တော်တော်လေး ကောင်းပါတယ်။ အိမ်ကလူတွေကို TV မှာ iPhone ကနေ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေကို လွယ်လွယ်လေး ပြလို့ရတဲ့အတွက် ကြောင့် air play သီးသန့် အသုံးပြုလို သူတွေ အတွက်တော့ မဆိုးပါဘူး။
Reply ↓ YLA January 20, 2013 at 12:14 am May I know some info about setting up and using asamedia centre ?
I doubt it’s somehow related to your router/switch. Which wireless router/switch are you using ? Is it gigabit ?
Also which OS are you on , Xbian or Rspbmc ( although I don’t think there is much difference ) ? I suggest you should switch your file sharing system type as there areafew options (NFS, SMB, FTP , etc ) .
Reply ↓ saturngod Post authorJanuary 20, 2013 at 11:16 am I am using 100 MB cable file transfer. I was comparing with other laptop from computer and raspberry pi. I can send4GB file to other laptop around5minute. However, raspberry pi is really slow at my home. May be , I can’t config well at SMB. I tested with SFTP and it also slow at my home network.
Reply ↓ YLA January 19, 2013 at 11:56 pm I agree with all you said, thanks for explanation, but, wait, how much are we paying for it ? Reply ↓ saturngod Post authorJanuary 20, 2013 at 11:20 am Yes, I understand what you say. I am trying to http://cubieboard.org/ but it already sold out can’t buy yet. It may not cheap like raspberry pi because of shipping charges Shipping charges cost is US $20 is too much for me and I hope they will available soon in SG.
Reply ↓ oakkar7 January 23, 2013 at 4:52 pm Cubieboard is not ready for mass production.
If you want to use only media PC, VIA embedded board isachoice.
I check that it can be ordered by RS. In RS Singapore site, APC8750 is also listed as 96 SGD. Notabad deal.
Pros : 512RAM, 2G build-in NAND Flash, VGA &HDMI , SD slot
Cons : Don’t support 1080 HD only 720, you will still need power supply, accessories (USB WiFi, keyboard, mouse etc), I think 2G Flash isalittle short for full blown Android, If you want to play, tweet and hack, Pi is the best.
ပေါပေါနေသေခဲ။ — saturngod Job Vacancy From MZ ForumWe want JAVA Programmer !!!!Seeking volunteers forawordpress.com blogSenior ProgrammerOpen source senior programmer and Project Manager post at Tbit SolutionJOB OPPORTUNITYFreelance to write the project with Java springService Technician (၁) ဦးအလိုရှိသည်IT AdministratorPHP Web Developer (Urgently)Senior Web Front-End Developer ၃ ဦးFacebook Tweets by @saturngod